नरेठाँटीमा स्व. नरबहादुर पुनको स्मृतिमा आधुनिक नरेठाँटी पार्क निर्माण कार्य तीब्र ! – ebaglung.com
२०७४ माघ ४, बिहीबार १८:५०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७४ माघ ४ । धुलो र कोलाहलबाट विश्राम लिएर केही समयका लागि घुम्न चाहनेका लागि गल्कोट नगरपालिका २ नरेठाँटीमा पार्क निर्माण सुरु भएको छ । नरेठाटी वडाभित्र बसोबास गर्ने खामे पुनहरुले स्वर्गिय नर बहादुर पुनको स्मृतिमा नरेठाँटी पार्क निर्माण गर्न लागेका हुन ।
पहिले पहिले खाद्यान्न लिन बुटवल (बटौली) जानुपर्ने र भारी बोकेर आउदा बिश्राम गर्ने ठाउको अभाव भएकोले स्वर्गिय नर बहादुर पुनले नरेठाँटीमा बिसाईफेर्नका लागी बनाएको ठाँटीको मरम्मत एवं संरक्षण गर्दै मेजर देब बहादुर पुनको नेतृत्वमा पुन समुदायले पार्क निर्माण गर्न लागेको स्थानिय थम बहादुर पुनले जानकारी दिए ।
उक्त पार्कमा पुन समुदायबाट सहयोग गर्ने ब्यक्तिहरुको नाम, महिला तथा पुरुष शौचालय, बिश्राम गर्ने स्थानहरु, फुलको बगैचा, खानेपानीको ट्यांकी र धाराहरु समेत जडान गरिने पुनले बताए । नरेठाँटी स्थित सानिपाटा सामुदायिक बनको ३ रोपनी र खामे पुन समुदायको २ रोपनी जग्गामा पार्क निर्माण गरिदै छ । करिब ३५ लाखको लागतमा पार्क निर्माण सुरु गरिएको हो । आगमि फागुन सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण समितिले जनाएको छ ।
पुरानो संरचनाको ठाँटीलाई नयाँ संरचनाका आधारमा निर्माण गरिएको छ । झण्डै २ रोपनी क्षेत्रफलको जमिन विना काममा फालिएको थियो । उक्त जमिनलाई सदुपयोग गर्ने गरी पार्क निर्माण गरिएको हो । ठाँटी जीर्ण र प्रयोगबिहीन बन्दै जानु तथा गल्कोटमा पार्कको अभाव देखेपछि खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने चाहना अनुसार स्वदेश तथा बिदेशमा भएका पुनहरुबाट आर्थिक संकलन अभियान चलाई पार्क निर्माण गर्न लागिएको पुनको भनाई छ ।
‘युवा र प्रौढले पनि घुमेर आनन्द लिन मिल्ने स्थानको रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।’ उनले पार्कलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागी भीर तर्फ पर्खाल लगाउने, फुलवारी बनाउने बताए । भीरको रुपमा चिनिने स्थानलाई पार्क बनाएर गल्कोटबासीलाई घुम्ने स्थान बनाएपछि नरेठाँटीको व्यवसायमा पनि सुधार हुने स्थानिय बुल बहादुर केसीको विश्वास छ । केसीका अनुसार पुन समुदायले आफनो स्वर्गिय पुर्खा नर बहादुर पुनको स्मृतिमा पार्क बनाउनु प्रसंसनीय कार्य भएको र सामुदायिक बनले समेत बनको केहि जग्गा उपलब्ध गराएको बताए ।
पार्कको करिब ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै निर्माण गरिएका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समेत घुम्न जान सहज हुने केसीले बताउनुभयो । हाल पार्कको भवन देखि माथी जानका लागी १ सय ७२ ओटा सिँढी निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै सिमेन्टको प्रयोगबाट ५ ओटा बेन्च, १० ओटा टेवल, प्रदेशद्धार समेत निर्माण गरिएको छ ।
धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकोत्सव : पढाईको गुणस्तर खस्किएकोमा चिन्ता व्यक्त !